ရေဘးသင့်ပြည်သူများအတွက် SMS မှပေးပို့ လှူဒါန်းမှုတွင် Ooredoo Myanmar က ဆတူလိုက်ပါလှူဒါန်းမည် | မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
» ရေဘးသင့်ပြည်သူများအတွက် SMS မှပေးပို့ လှူဒါန်းမှုတွင် Ooredoo Myanmar က ဆတူလိုက်ပါလှူဒါန်းမည်
ရေဘးသင့်ပြည်သူများအတွက် SMS မှပေးပို့ လှူဒါန်းမှုတွင် Ooredoo Myanmar က ဆတူလိုက်ပါလှူဒါန်းမည်
Myanmar က ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းဖုန်း ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ငွေသားလှူဒါန်းနိုင်မည့် အစီအစဉ်တွင် လှူဒါန်းသူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် လိုက်ပါ၍ ဆတူ လှူဒါန်းမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကာတာဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၏ Code နံပါတ် ၄၅၄၈ သို့ မိမိလှူဒါန်းလိုသည့် ငွေပမာဏကို ရိုက်ထည့်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်မည့် အစီအစဉ်တွင် မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူတစ်ဦးက တစ်ဆယ်ကျပ်လှူပါက Ooredoo Myanmar က တစ်ဆယ်ကျပ် လိုက်ပါလှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ထောင်ကျပ် လှူဒါန်းပါက ထပ်မံ၍ တစ်ထောင်ကျပ် လိုက်လံ လှူဒါန်းမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အဆိုပါ SMS ဖြင့် လှူဒါန်းမှုအစီအစဉ်တွင် နောက်ဆုံးလက်ခံရရှိသော ငွေပမာဏတန်ဖိုးအတိုင်း Ooredoo Myanmar က ဆတူလိုက်လံ
လှူဒါန်း သွားမည် ဖြစ်သည်။
Ooredoo Myanmar ၏ အထက်ဖော်ပြပါ Code နံပါတ်သို့ HELPMM ဟု ဦးစွာရိုက်ထည့်ပြီး Space တစ်ချက်ခြားကာ မိမိလှူဒါန်းမည့် ငွေပမာဏကို ရိုက်၍ ပေးပို့ လှူဒါန်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Ooredoo Myanmar ၏ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေး အစီအစဉ်ကို ဦးတည်၍ရရှိလာသည့် စုစုပေါင်းအလှူငွေ အားလုံးပေါင်း(သုံးစွဲသူထံမှရရှိသည့် လှူဒါန်းငွေ + အူရီဒူးမြန်မာ၏ ဆတူထည့်ဝင် လှူဒါန်းငွေများ) ကို ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍
ရေဘေးဒဏ်ခံ ဒေသများအတွက် စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
: ရေဘးသင့်ပြည်သူများအတွက် SMS မှပေးပို့ လှူဒါန်းမှုတွင် Ooredoo Myanmar က ဆတူလိုက်ပါလှူဒါန်းမည်
: Ooredoo Myanmar က ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းဖုန်း ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ငွေသားလှူဒါန်းနိုင်မည့် အစီအစဉ်တွင် လှူဒါန်းသူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် လိုက်ပါ၍...
Cracker Barrel Games For IOS
Twitch နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရန် YouTube Gaming ဝက်ဘ်ဆို...
iPhone 5c ရောင်းချမှု ရပ်ဆိုင်းရန် Apple စီစဉ်နေ
iPhone 6s တွင် Apple Watch ကဲ့သို့သော animated bac...
Samsung Galaxy Note5ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရောင်းခ...
iPhone ပုံစံတူပြီး သူ့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာမယ့် HTC ...
iOS9တွင် Safari လုပ်ဆောင်ချက် နှစ်ဆ ပိုမြန်လာမည်...
Apple ရဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး ဖြန့်လိုက်တဲ့ iPhone 6s နဲ...
Whatspp Android version မှာ လက်ခလယ် ထောင်တဲ့ Emoj...
Private Calculator For IOS
ခေါက်သိမ်းနိုင်သော iPhone ကီးဘုတ်တစ်မျိုးကို LG မိ...
Microsoft စမတ်ဖုန်းသစ်များ၏ ဓာတ်ပုံများ အွန်လိုင်း...
အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်း လက်မှတ်များကို App မှ ဝယ်ယူနိုင...
ဖုန်းထဲမှာ effect တွေ အမိုက်စားနဲ့ လုပ်မယ်-PIP Cam...
ဖုန်းရဲ့ SENSOR ပာာဘယ်လိုနေရာအတွက်သုံးထားတာလဲ ???
Apple မှစက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် iPhone 6s/6s Plus တ...
Ooredoo က BINDEZ နှင့် ပူးပေါင်း၍ Tha Din Applicat...
OPPO Mirror5အား အဖြူ၊ အပြာ အရောင်နှစ်မျိုးဖြင့် ...
ဆွေသဟာဝန်ဆောင်မှုတွင် ၅၅ မိနစ် အခမဲ့ပြောဆိုခွင့် ရရ...
Clash Of Clans Account ရဲ့ ID Gmail Change နည်း
Translate Photo For IOS
တစ်ကိုယ်ရေ လုံခြုံရေး ဦးစားပေး Blackphone2ကို စ...
iPhone ကို တစ်ပတ်ခန့် အားပြန်သွင်းရန်မလိုဘဲ သုံးနိ...
Windows 10 စမတ်ဖုန်းအပါအဝင် စမတ်ဖုန်းသစ် သုံးမျိုး...
Six-Guns သေနတ်ပစ်ဝါသနာပါသူများအတွက် GAME apk
သီချင်းရဲ့အသံထွက်ပိုကောင်းစေမယ့်-Equalizer Music P...
Mobile App နှင့် သူ၏ အရောင်များ
ထွက်ရှိလာတော့မည့် Moto 360 2
ထွက်ရှိတော့မည် Sony Xperia Z5 Compact
Financial Book For IOS
LG G Pad II 10.1 တွင် Snapdragon 800 နှင့် WUXGA s...
မိုဘိုင်းအင်တာနက်ပေါ်မှ အချက် အလက်သုံးစွဲမှု ကျေးလက်...
Android KitKat အတွက် Tips and Tricks များ
Virus သတ်ရာမှာ သေးသေးလေးနဲ့ အစွမ်းထက်တဲ့ Smadav 20...
Wanted Poster Pro For IOS
ကင်မရာ ချွတ်ယွင်းချက်ရှိသော iPhone6Plus အချို့ကိ...
၂၀၁၆ တွင် မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ဆက်စပ် ထုတ်ကုန် ဝယ်လ...
Samsung Galaxy Note5အချက်အလက်များ
ဖုန်းကို ပေ့ါပါးစေတဲ့-Clean Master (Boost & AppLoc...
DU Speed Booster丨Cache Cleaner v2.6 Apk (least Ver...
iPhone6Plus ရဲ့ ကင်မရာများကို အသစ်ပြန်လဲပေးမည့် ...
ကင်မရာ လှည့်လို့ရတဲ့ ဈေးသက်သာ နောက်ဆုံးပေါ် စမတ်ဖု...
Samsung က အရွယ် အစားကြီးမားတဲ့ ၁၈လက်မ မျက်နှာပြင်ရ...
ဒီApp ကinternetအတွက်ပါခင်ဗျာ...( Stabilizer Booste...
Android နှင့်သုံးနိုင်မည့် BlackBerry Venice ဖုန်း...
Medical Dictionary For IOS
iPad Pro ထုတ်လုပ်မှုကို အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ဖွယ်ရှိ...
ပြည်တွင်း စမတ်ဖုန်း အသုံးပြုမှုပမာဏ နိုင်ငံ၏ ၇၀ ရာခ...
SMS Backup & Restore Pro v7.46 for Android(latest ...
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများအတွက် " အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဦးအော...
Apple TV သစ်ကို iOS9နှင့်အတူ အသုံးပြုနိုင်ဖွယ်ရိ...
Windows 10 မှာ အော်တို Update လုပ်နေခြင်းကိုပိတ်နည...
LoginBox Pro For Ios
သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များကို စမတ်ဖုန်း နည်းပညာဖြင့် ရင်ဆ...
Black box မှတစ်ဆင့် Corvette ကား၏ ဘရိတ်များကို သုေ...
အသစ်ထွက်မည့် Android update ကို Marshmallow ဟုခေါ်ဆ...
MEC ဖုန်းလိုင်းပိတ်ခြင်းများ Customer Care Center ...
သဘာဝဘေးဒဏ်ဖြစ်ပေါ်သော ဒေသများတွင် MEC ဖုန်းအချင်းချ...
ဖုန်းခေါ်ဆိုခ နှင့် အင်တာနက် အသုံးပြုခ ပိုမိုသက်သာမ...